Maitiro ekudzima chikamu chesafa nhoroondo paMac | Ndinobva mac
Nhoroondo yewebhu mabhurawuza ndeimwe yeakanakisa maturusi avakaisa kwatinogona, kugona tarisa kuti ndeapi ekupedzisira mapeji ewebhu atavhura asi isu hatirangarire kuchengeta mune zvatinoda. Kunyangwe kune vamwe vanhu, iyo nhoroondo ishurikidzo kwete chikomborero, sezvo ichisiya mutsetse wemapeji ewebhu awakashanyira.
Safari, semamwe mabhurawuza ari pamusika, inotibvumidza kwete chete kudzima yese yekubhurawuza nhoroondo kuitira kuti tirege kusiya chero musara pamakomputa ane hukama neiyo ID, kana isu tine data reSafari rakawiriraniswa, asi zvakare rinotibvumidza kusarura mamwe mapeji ewebhu, atisingade kurekodha pakombuta yedu.
Kana mhinduro yekudzima nhoroondo isiri sarudzo, saka tinotsanangura kuti tingaite sei bvisa mamwe marekodhi akachengetwa munhoroondo pasina kuita kuti ubvise zvachose. Maitiro aya akapusa uye haatombodi ruzivo rwakawandisa, saka kana ruzivo rwako rwakashomeka, hauzove nedambudziko kuzviita.
Bvisa chikamu chesafa nhoroondo
Kutanga, isu tinofanirwa kuwana iyo Safari nhoroondo, kuburikidza neiyo Nhoroondo menyu bar uye kusarudza Ratidza zvese nhoroondo, kana nekudzvanya makiyi Raira + Y.
Tevere, isu tinoenda kune iyo peji rewebhu rakachengetwa munhoroondo yatinoda kudzima uye tinya pairi neiyo bhatani rekurudyi rembeva.
Kubva pane sarudzo dzichaonekwa, tinosarudza Bvisa.
Maitiro aya haazotibvunze kusimbiswa chero nguva uye haigadzirisike, saka isu tinofanirwa kunyatso kujekesa nezve peji ripi rewebhu ratiri kuda kubvisa, nekuti hakuzovi neimwe nzira yekupedzisira yekuridzorera kana yangobviswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekujekesa chikamu cheSafari nhoroondo paMac
Apple iri kuronga kuburitsa kunyorera nhau sevhisi kuburikidza neApple News